स्थानीय सरकार संचालनको चार वर्ष पुरा भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष स्थानीय सरकारको ५ औं तथा यो कार्यकालको अन्तिम आर्थिक वर्ष पनि हो । नेपालको संविधान अनुसार स्थानीय सरकारको ५ औं वर्षमा पुनः स्थानीय तहको निर्वाचन हुनेछ । यो आर्थिक वर्ष स्थानीय तहको निर्वाचनको वर्ष हो । सम्भवत आगामी वैषाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुनेछ ।
श्रावण १ बाट सुरु भई असार मसान्त सम्मको आर्थिक वर्ष भएपनि यो वर्ष निर्वाचनको वर्ष समेत भएकोले चालु आर्थिक वर्षका योजना तथा कार्यक्रमहरु चैत्र भित्रै सम्पन्न हुनेगरी स्थानीय सरकारहरु लागेका छन् । यसै विच पाल्पाको वगनासकाली गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षका योजना तथा कार्यक्रमहरुलाई कसरी अगाडी वढाउदै छ, भन्ने विषयमा पाल्पापाटी अनलाईनका सम्पादक विष्णु घिमिरेले बगनासकाली गाउँपालिका पाल्पाका प्रमुख प्रशाशकीय अधिकृत विष्णु वहादुर घर्ती संग केही कुराकानी गर्नुभएको छ । प्रस्तुत छ, कुराकानीको संक्षिप्त अंश ।
चालु आर्थिक वर्षका योजना तथा कार्यक्रमहरुको अवस्था के छ ?
धन्यवाद, यो आर्थिक वर्ष वर्तमान जनप्रतिनिधिहरुको अन्तिम आर्थिक वर्ष हो । यो वर्ष निर्वाचन समेत हुने भएकोले हामी यो वर्षका योजना तथा कार्यक्रमहरु समयमै सक्याउन लागेका छौं । सम्भवत चैत्र भित्रै योजनाहरु फरफारक गरी सम्पन्न गर्ने भनेर लागेका छौं ।
अहिले असोज महिनाको आधाआधी भइसकेको अवस्था छ, उपभोक्ता समितिहरुको गठन तथा तालिम संचालनको अवस्था के छ ?
चालु आर्थिक वर्षको योजना तथा कार्यक्रमहरुको लागि बगनासकाली गाउँपालिकाका ९ वटै वडाहरुमा सबै योजनाहरुको उपभोक्ता समिति गठनको काम सक्याएर, हामीले उपभोक्ता समितिको तालिम पनि सक्याइसकेका छौं । अहिलेसम्म गाउँपालिकाका ९ वटा वडाहरुमा २ सय ५२ वटा उपभोक्ता समितिहरुको लागि तालिम सम्पन्न भएका छन् । अहिले सम्ममा उपभोक्ता समिति गठन र उपभोक्ता समितिको तालिम सम्पन्न भइसकेको अवस्था छ ।
योजना तथा कार्यक्रमहरुको सम्झौताको अवस्था के छ ?
उपभोक्ता समितिहरुको तालिम पश्चात योजनाहरुको सम्झौता सुरु भएको छ । तालिमले योजना सम्झौतालाई सहज बनाएको छ । असोज मसान्त भित्र योजना सम्झौता गरिसक्ने भनेर हामीले योजना बनाएर काम गरेका थियौं । हाम्रो योजना अनुरुप नै भएको छ । सम्भवत हामीले असोज भित्रै योजना सम्झौता पनि सक्याउँछौं । यहि महिनामा दशैं समेत परेकोले केही दिन तलमाथी होला, नत्र हामी योजना अनुसार नै काम सम्पन्न गर्नेगरी लागेका छौं ।
प्राविधिकहरुको अवस्था के छ ? तपाइले भनेझै समयमै योजना सम्पन्न गर्नसक्ने आधार के छन् ?
बगनासकाली गाउँपालिकामा प्राविधिक तथा अन्य कर्मचारीहरुको त्यस्तो अभाव छैन् । हामीले समय अगावै उपभोक्ता समितिहरुको तालिम चलायौं, हाम्रा उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरुलाई जानकार गराएका छौं । गाउँपालिकामा प्राविधिक कर्मचारीहरु थप गरेका छौं । उपभोक्ता समितिका पधादिकारीहरु कहिकतै अल्झनुपर्ने अवस्था छैन् । पहिला पहिला वैंक टाढा हुदा पनि केही ढिलाई हुन्थ्यो, अहिले गाउँपालिका परिसर जस्तैमा वैंक छ । उपभोक्ता सचेत र जानकार छन् । कर्मचारीहरु जुजारु छन्, समयमै योजना सम्पन्न हुनेमा म आशावादी छु ।